प्रवाश – Page7– Google pati
उत्तर कोरिया पुग्ने पहिलो राष्ट्रपति ट्रम्प
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच दक्षिण र उत्तर कोरियाको सैनिकरहित सीमा क्षेत्रमा भेटवार्ता भएको छ। उत्तर कोरियाली नेता र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच सीमा क्षेत्रमा वार्ता भएको यो पहिलो पटक हो। आइतबार दिउँसो दक्षिण कोरियाली समकक्षी मुन जाइ इनसँगै राष्ट्रपति ट्रम्प उत्तर र दक्षिण कोरियाको सैनिकरहित...बाँकी
विश्वभर तरङ्ग मच्चाउने तस्विर, दबाबमा अमेरिका
रिपब्लिकनको बहुमत रहेको अमेरिकाको सिनेटले मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा सहायता पठाउने सम्बन्धी एक विधेयकलाई पारित गरेको छ । सिनेटले अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने शरणार्थीका कारण सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि आर्थिक सहायता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने एल साल्भाडोरका बाबुछोरी नदीमा डुबेर मृत भेटिएको...बाँकी
अमेरिकी विदेशमन्त्री दिल्लीमाः दिउसो विरोध, राति स्वागत
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओ दुई दिने भ्रमणका लागि मंगलबार राति नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन् । उनी खाडी क्षेत्रका केही राष्ट्र हुँदै भारत आइपुगेका हुन् । भारतले उनको भ्रमणको बारेमा यही जुन २० तारेखमा जारी गरेको वक्तव्यमा आपसी चासो, क्षेत्रीय र दुई पक्षीय विषयमा कुराकानी हुने जनाएको थियो । पम्पेओ मंगलबार...बाँकी
अचम्म ! केटी जिस्काउने ६८ प्रतिशत ५० वर्ष माथिका !
भनिन्छ तन बुढो भएपनि मन बुढो हुँदैन । यो भनाईलाई पाका मानिसहरुका यौनिक व्यवहारले पनि पुष्टि गर्दछ । भारतको उत्तर प्रदेशमा गरिएको एक अध्ययनले पाका मानिसहरु महिलालाई जिस्काउनमा सबैभन्दा अगाडि रहेको देखाएको छ । वुमन पावर लाइन १०८० को तथ्यांक अनुसार महिलामाथि दुव्र्यवहारको आरोपमा अहिलेसम्म जेल पठाइएका मध्ये ६८ प्रतिशत...बाँकी
सावधान ! सिरिन्ज प्रकरणः एटिएमदेखि फिल्म हलहुँदै सडकसम्म
एक युवतीले मध्य रातमा ‘एचआइभी क्लवमा स्वागत छ’ भन्दै युवकलाई सिरिन्ज लगाइन। युवतीले एचआइभी संक्रमित सुई युवकलाई लगाएको पीडितले प्रहरीलाई जानकारी दिए। यो घटना अमेरिकाको सिटल शहरको उत्तरी क्षेत्रको हो। उक्त घटना १७ सेप्टेम्बरको करिव १२ बजेर १५ मिनेटको मध्य रातमा घटेकोे हो। आफुलाई सुई लगाउने महिला करिव २० वर्ष...बाँकी
नेपालको धार्मिक अभ्यासमा अमेरिकी असन्तोष
संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाले नेपालमा धर्म परिर्वतन विरुद्ध भएका कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धर्म परिर्वतन विरुद्ध नेपालको संविधान र मुलुकी फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ। सन् २०१८ को ‘रिपोर्ट अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम’मा नेपालप्रति त्यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गरिएको हो। विश्वका हरेक...बाँकी
भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली कारबाहीमा
भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली कारबाहीमा परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले उनलाई गएराती भएको खेलमा आचारसंहिता तोडेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । अफगानिस्तान विरुद्धको उक्त खेलमा एलबीडब्लु अपिल गर्ने क्रममा कोहली आक्रामक भएका थिए । रोमाञ्चक भएको उक्त खेलमा अफगानिस्तानले भारतलाई हराउने सम्भावना देखिएको थियो...बाँकी
एक महिला पत्रकारमाथि गोली प्रहार
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको मयूर विहारको आसपास धर्मशीला क्यान्सर अस्पतालको रेड लाइट छेउमा एक पत्रकार महिलामाथि गएराति १२ः३० बजे गोली प्रहार भएको छ । क्राइम रिपोर्टर मिताली चंदोलाको बायाँ हातमा गोली लागेको छ । प्रहरीले उनलाई नजिकैको धर्मशीला अस्पतालमा उपचारका लागि लगेको थियो । उनको हालत अहिले खतरा बाहिर रहेको...बाँकी